Fitaterana ana habakabaka: voarara ny mitatitra olona avy any Sina | NewsMada
Fitaterana ana habakabaka: voarara ny mitatitra olona avy any Sina
Nanao filazana iraisana ny minisiteran’ny Fitaterana, ny minisiteran’ny Fahasalamana ary ny minisiteran’ny Fizahantany fa voarara ho an’ny kaompaniam-pitaterana ana habakabaka rehetra, manomboka izao, ny mitatitra olona avy any Sina na ireo nandalo tany amin’ity firenena ity ao anatin’ny 14 andro niaingany tany.
Mihatra avy hatrany amin’ireo mpandeha avy any Macao, avy any Taiwan ary avy any Hong Kong ihany koa izany filazana navoaka izany. Hisy ihany anefa ny fahazoan-dalana manokana ho an’ireo mpandeha avoakan’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ary iandraiketan’ny fanjakana ny fanagiazana azy ireo amin’ny toerana mitokana ho fanaraha-maso ny fahasalamany tsy hampiparitka ny aretina Coronavirus eto amintsika.
Mikasika ireo marary eny amin’ny hopitaly Anosiala indray, nilaza ny minisiteran’ny Fahasalamana fa efa voaporofo izao fa tsy ny retina Coronavirus no nahazo ireo olona roa marary arahi-maso eny amin’ny hopitaly Anosiala rehefa natao ny fitialana ny aretina.
Mbola miteraka tahotra ho an’ny Malagasy ireo mponina manodidina, indrindra ireo iray hopitaly eny an-toerana, anefa ny nilazan’ny sampandraharaha manokana ao amin’ny minisitera fa misy Sinoa sivy sy Malagasy valo arahi-maso ny fahasalamany ao amin’ity hopitaly eny Aosiala ity.